Omunye bendabuko yemifino amalungiselelo e emizi abaningi basekhaya Kuban isaladi. Ebusika, ivalwe amabhange, bese ujabulele imiphumela umsebenzi wabo futhi phakathi nezinsuku kanye namaholide. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ngokwenza. Kungaba iklabishi nge bell pepper, ikhukhamba. Ngezinye izikhathi kuwo engeza anyanisi, futhi ngezinye izikhathi abayiphethe ngaphandle kwakhe. Uphiko kuphela, amandla in zonke izindlela - kungcono namanzi utamatisi ezivuthiwe. Kuyinto ngiyabonga kubo ukuthi isidlo kuvela ayakhanya futhi ezimibalabala.
Kuban isaladi nge iklabishi ebusika
Indishi eqeda kungenziwa zisakazwa embizeni ilitha noma ukhethe inani ezincane ngokubona kwayo. Per kilogram of iklabishi ukuthatha 4 kg utamatisi, bell pepper 1.5 kg (kakhulu uma kuba emibalabala ke isidlo kuyoba ezimibalabala ngaphezulu) kanye 1 kg anyanisi. Futhi idinga isigamu ilitha elicwengisiswe amafutha yemifino, inkomishi kwesigamu uviniga, usawoti kanye noshukela ukunambitha, nedlanzana peppercorns abamnyama umfire ambalwa ehamba.
Kuban isaladi ebusika ibhalwe isitsha esikhulu, lapho kuyoba elula uhlanganise wonke izithako futhi upheka nabo esikhathini esizayo. A inqubo kwasekuqaleni wokuhlanza imifino. Khona-ke bonke ngothi lwabo kufanele usike. Iklabishi - izicezu, bell pepper - futhi, onion - izindandatho uhhafu, notamatisi - Diced. Imifino ehlangana futhi wabashukumisa, engeza usawoti, ushukela, amafutha okupheka kanye namakha, ke wagqoka umlilo. Ngo inqubo amalahle izithako kumele ake ijusi, okuyinto ngeke ubavumele ukuba awatshise. Uma isaladi amathumba, uthele uviniga kulo, ukupheka imizuzu embalwa bese ngelulela embizeni ahlanzekile. Kuyinto efiselekayo okwengeziwe abilayo imizuzu 10 ke uvalwe ivaliwe, epholile futhi wathumela kusitoreji endaweni ekamelweni noma emiphongolweni.
Kuban isaladi: iresiphi kanye ukhukhamba
Enye inguqulo ngokulinganayo esihlwabusayo egqamile ukupheka afaka izithako kusukela esandulele, kodwa kusikisela ukuba khona izingxenye ezengeziwe. 5 kg of utamatisi ezivuthiwe ukuthatha amakhilogramu pepper, iklabishi kanye no-anyanisi, 1.5 kg yamakhukhamba futhi 500 c. izaqathi. Kusadingeka green (pair lwemishayo), ingilazi usawoti, uwoyela uviniga. Ezindimeni zamakha ungasebenzisa leaf bay futhi peppercorns.
ubusika Kuban isaladi kule ukukhululwa nazo uzilungiselele ukusika zonke imifino kanye eminye ukuxuba kubo ngu, lokho nje ekwelapheni ukushisa wenziwa kakade ebhange. Okungukuthi, isitsha lapho ukubeka izingxenye, ungathatha plastic. Izithako bafa njengoba kule iresiphi odlule. Ukhukhamba zivame usike mncane isigamu-amasongo, imifino - njengoba fake ngangokunokwenzeka, futhi izaqathe umane grate. Salt, uviniga namafutha wanezela ngqo isitsha nge imifino kanye pepper kanye bay leaf - e jar ngamunye. Khona-ke isaladi rammed ku kubo, kokushiya isikhala kancane phezu juice (ke bayokhululwa inqubo ukupheka). Amabhange (ilitha) inzalo for isigamu sehora, bese shaqa.
Kuban isaladi iklabishi ebusika ngaphandle
Labo abayithandi le yemifino noma ekholelwa ukuthi yena ebusika ikhona, kungase kube ukuhlakanipha ukusebenzisa iresiphi elandelayo. Yonke imikhiqizo zithathwa ngezabelo alinganayo ngesisindo sezinti (utamatisi, bell pepper, onion, isanqante ikhukhamba) - kilogram. amafutha yemifino ezidingekayo 500 ml, nosawoti, ushukela kanye uviniga - 2 wezipuni. Ukuze nokucija ungakwazi ukwengeza kancane pepper ashisayo. Lungisa isaladi ebhodweni elikhulu, lapho amafutha kuthululwe futhi shelled izaqathe okugazingiwe, sibe yimichilo (ungasebenzisa entantayo). imizuzu 15-20 kuya ochotshoziwe amahlamvu pepper. Ngemva esifanayo - anyanisi izindandatho uhhafu. Salad akufanele sikhohlwe ugovuze njalo. Ekupheleni engeza utamatisi (Diced), okumele ake ijusi, futhi ngemva kwemizuzu engu-10 yamakhukhamba (semicircles). Okulandelayo kuba ithuba ushukela, usawoti kanye uviniga. Ngemuva kwemizuzu engu-15 isaladi usulungile. Kufanele ibekwe izimbiza oyinyumba naseduze. Abakwazi ingagcinwa iminyaka 2-3. Kodwa njengoba umthetho, emthonjeni amasheya akukho kwesokunxele.
Salad nge uphayinaphu kanye inkukhu - esiphundu, elula futhi nice
Ubani wathola amagagasi kagesi? amagagasi kagesi - etafuleni. Izinhlobo amagagasi kagesi
Ithempeli "Okuphila Spring" e Tsaritsyno nomlando wayo
Amanzi Museum e Moscow, izithombe, izibuyekezo, kanjani ukuze uthole
Gasoline ukuxegiselwa - liyisici esidingekayo